ederede adighi 2 afọ 7 ọnwa gara aga #911
Bonjour, enwere m nsogbu, enwere m A330 prologue site na BBS na m na-etinye textures na-apụ n'anya na ihe ọ ga-abịa? mara na nsogbu ahụ bụ ngwaahịa na PMDG 777. Ekele.
ederede adighi 2 afọ 7 ọnwa gara aga #912
Nchịkọta a bụ English naanị. Maka French Rikooo Forum, soro njikọ a: www.rikoooo.com/fr/forum/
ederede adighi 2 afọ 7 ọnwa gara aga #934
I nwere ike iru ua nso FSX vil utilisez. V nwere ike ịkwado nke ọma dị ka ederede FSX Ọkachamma ma ọ bụ SP1 / SP2 ma ọ bụ lụpụ atụla ya. Si vous travaillez avec une version à vapeur, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre carte graphique, ou vous avez trop d 'add-ons nwoke fonctionnant en même temps. Faites nwere ike ọzọ, merci
Oge ike page: 0.191 sekọnd